Mira uchishuva kuti chimwe chinhu chiitike uye enda unoita kuti chiitike. - Anotungamira - Quotes Pedia
Vanhu vakasarudzika zvisikwa zvepasi pano, zvakare vane usimbe zvikuru zvakare. Tese tinoshuvira kubudirira muhupenyu hwedu, isu tese tinoshuva dai takadzivisa chimwe chinhu chakaipa kuti chiitike muhupenyu hwedu, asi kune vanhu vashoma kwazvo avo vanotora matanho ekuita kuti zvishuwo zvavo zviitike.
Isu tinoshuva kuve chiremba mukuru kana injinjini inoshanda, muimbi wekuimba, mutambi akagwinya, etc. Isu tinoshuva dai taipa kubvunzurudza kukambani hombe iyi; tinoshuva kuti dai takatamba nemhanzi iyi; tinoshuva dai taigona kutamba nemumwe mutambi wenhabvu kamwe muhupenyu hwedu. Tese tine zvido zvakawanda.
Nekudaro, isu hatinzwisise chinhu chidiki diki. Hatinzwisise kuti pane kungomirira uye kungoshuva kuti chimwe chinhu chiitike nesu, kana isu tikaita kuti zviitike kuti zviitike, tinogona kuenda nhanho imwe padyo nechiroto chedu, zvido zvedu.
Gara uchiyeuka kuti kana uine hope, chinangwa, une simba rekuizadzisa. Zvinozviratidza kwauri nekuti wanga wakagadzirira uye kugona kugona kutanga kufamba munzira yekuzadzisa chiroto. Chasara, iwe unofanirwa kuzviita uri wega.
Iwe unofanirwa kuramba uchidzinga. Iwe unofanirwa kuramba uchirwira icho. Nyika icharamba ichikanda matambudziko pauri. Nekudaro, uchiri kugona kubata kubatirira pairi. Uchatarisana nenguva dzakaoma; Kurota kwako kunoswedera pedyo pakuparara. asi iwe unofanirwa kuvapa dziviriro kwavari. Iwe unofanirwa kuvachengeta vari vapenyu.
Nekuti, gara uchiziva chinhu ichi chimwe chete kuti kana wakabatirira kune chinangwa chako, zvinongokubatsira iwe kuvandudza hunyanzvi hwako kuzviita. Naizvozvo, pese paunenge uchishuvira chimwe chinhu, tora matanho mashoma ekuzadzisa nzvimbo iyoyo. Hapana chinouya wakasununguka; iwe unofanirwa kuti zviitwe.
Zviite Izvozvi Quotes
Ita Izvo Zvimiriri
Kukurudzira Work Quotes
Motivational Quotes Yekushanda
Usamhanye chero chinhu. Kana nguva yacho yakwana, zvichaitika. - Asingazivikanwe
Usamhanyira mune chero chinhu. Zvakakosha kunzwisisa kuti chimwe nechimwe chiitiko muhupenyu hwedu…
Magumo ese mavambo matsva. - Asingazivikanwe
Magumo ese mavambo matsva. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Vanhu vakabudirira kwazvo pasirese, havana kubvira vatanga sevanhu vakabudirira kwazvo. - Asingazivikanwe
Vanhu vakabudirira kwazvo pasirese, havana kubvira vatanga sevanhu vakabudirira kwazvo. - Anonymous Related…